Ahoana ny fametrahana ny fanarenana voaova amin'ny LG G2 D802 | Androidsis
LG G2: Ahoana ny fametrahana ny fanovana voaova amin'ny Android 4.4.2 Kit Kat
Francisco Ruiz | | Fanarenana Android, LG, Tutorials, Android Version
Manaraka izany dia hanazava ny dingana feno izay tsy maintsy tanterahina aho mba hahafahana mamoaka na apetraho ny fanarenana nohavaozina ao amin'ny LG G2 modely D802 amin'ny Android 4.4.2 LG Kit Kat ofisialy. Alohan'ny handehanantsika miasa, dia tsy maintsy misaotra ny mpamorona ireo fampianarana manaitra ireo isika, izay tsy iza fa ireo mpampiasa efa taloha HTC Mania, ary ho voafaritra kokoa amin'ny Acura, iallStar o Josephica481 ankoatra ny hafa.
Tamin'ity indray mitoraka ity ry zalahy avy LG Nohamafisin'izy ireo kely ny fahafahanay mametraka ny Ny fanarenana dia novaina tao amin'ny Android 4.4.2 Kit Kat, izany no antony tsy maintsy ataontsika voalohany manambany amin'ny kinova voalohany 4.2.2 ary atombohy manomboka any ny fizotrany miorim-paka aloha ary avy eo apetraka ny TWRP Recovery ary manavao azy avy amin'ny Recovery amin'ny alàlan'ny a mikirao praogramanao amina endrika ZIP namboarina mba hitehirizana ny fanovana voaova aorian'ny fizotran'ny firmware.
Voalohany indrindra dia tsy maintsy milaza aminao aho fa ny tenako dia nanambany ny LG G2 modely D802 a Android 4.2.2 Ny fampiasana an'io fomba io ary raha manaraka ny dingana mankany amin'ilay taratasy isika ary tsy mandingana akory dia hiasa tanteraka.
2 Fomba fametrahana Android 4.2.2 amin'ny maody ivelan'ny Internet
Stock Firmware an'ny maodelinao.
Fomba fametrahana Android 4.2.2 amin'ny maody ivelan'ny Internet
Ny zavatra voalohany hataontsika dia ny manamboatra ny solosaintsika manokana hahafahantsika manao izany zahao ireo rakitra sy lahatahiry miafina rehetra ao amin'ny rafitra, noho izany no andehanantsika Safidy fampirimana / Hijery / Asehoy ireo fisie sy lahatahiry miafina rehetra:
Apetrakay izao ny shttp3 mitantana azy ho mpitantana ary misafidy ireo safidy nomeko ireto ambany ireto:
Raha vantany vao apetraka dia mandeha amin'ny làlana C / shttps ary mihazakazaka toy ny mpandrindra izahay http.exe, avy eo tsy mila manova ireo seranana manokana miseho ao amin'ny kiheba isika taratasy fanomezam-pahefana: (Aza adino ny mitahiry ireo fanovana amin'ny bokotra OK ananantsika eo amin'ny farany ambony havanana).
Mandeha any amin'ny bara fiasan'ny Windows ary manokatra ny safidy izahay Settings de shttp3:
Mandeha amin'ny zotra izahay izao C: \_ shttps \_ www ary ao anatin'ny fampirimana Life Hofafantsika ny atiny rehetra ary adikao ireo efa nakarina teo aloha, lojika alohan'ny hamoahana ny votoatin'ny rakitra zainy.sz.
Vantany vao vita io dia mandeha amin'ny làlana isika C / windows / system32 / mpamily / sns / ary amboary ny fisie Tompon'ny maro, miaraka amina tonian-dahatsoratra mety misy WorPad manampy an'ity tsipika ity 127.0.0.1 csmg.lgmobile.com eo amin'ny faran'ny fisie dia tahirizo:
Tokony handeha amin'ny làlana izao isika C: PROGRAMDATA / LGMOBILEAX ary soloina ireo fisie ao anatiny miaraka amin'ilay fisie alaina teo aloha miaraka amin'ny anarana mitovy ihany. Raha ny lojika dia tsy maintsy mamaha ny zip isika taloha ary mandika ny atiny amin'ny làlana manokana, raha milaza amintsika izy fa efa misy izy ireo dia tsy maintsy mifidy ny safidy soloy daholo.
Vonona ny hanazava ny firmware tany am-boalohany LG kinova Android 4.2.2 amin'ny fomba ivelan'ny aterineto hialana amin'ny fetra napetraky ny LG.
Izao dia esorinay ny rakitra tselatra kdz na aiza na aiza ary esory ny fisie flashtools ny atiny hahafahany manatanteraka azy. Raha vantany vao unzip dia hanaraka ireto dingana ireto izahay:
Izahay dia mitantana ny shttp3 amin'ny maody mpandrindra, azo antoka fa efa nosokafanao izany raha toa ka efa nandamina azy teo aloha ianao.
Mihazakazaka ho mpitantana ny Windows Enabler izay ao anatin'ny fampirimana Flashtools, rehefa ampandehintsika izany dia mankany amin'ny bara asan'ny Windows isika ary mametraka azy ao ONN.
Novonoinay ny LG G2 ary ampifandraisintsika amin'ny PC izy io rehefa manindry ny bokotra etsy ambony dia hiditra ho azy izy io fomba fampidinana.
Izahay dia mitantana Flashtools amin'ny mpitantana ary avelanay ny zavatra rehetra asehoko anao eto ambany:
Tsindrio ny fampirimana eo amin'ny ankavanana ambony ary safidio izay nitahiry antsika firmware teo aloha 4.2.2 KDZ izay ampidinintsika mialoha, dia tsindrio ny bokotra fitsapana fanavaozana tranonkala mahazatra ary hiseho ity efijery ity izay hanindry ny bokotra Upgrade Start:
Aseho isika a fandrosoana ary rehefa mahazo ity efijery manaraka ity izahay dia avelantsika rehefa asehoko anao amin'ity pikantsary ity:
Manome izahay OK ary hiseho ny Flashtools ho an'ny fmanaparitaka ny mikirao praogramanao 4.2.2 avy amin'ny LG avy amin'izay azontsika atao faka aloha, hametrahana ny fanarenana nohavaozina ary farany havaozina hiverina amin'ny Android 4.4.2 Kit Kat nefa tsy very ilay fanamboarana novaina voalaza etsy ambony.
Mandeha tsy miteny izany fa ny Flashtools miasa, aza mikasika na inona na inona. Aza mieritreritra akory ny hanapaka ny terminal na inona na inona eto amin'izao tontolo izao, ary tandremo sao miditra amin'ny torimaso na modely hibernation ny solosaintsika na hakatona hametraka fanavaozana Windows.
Rehefa tapitra ny dingana, raha mijanona ao ny terminal sary miverina amin'ny logo fanombohana, manery ny terminal hamono izahay amin'ny alàlan'ny fitazonana ny bokotra Power mandritra ny folo segondra ary hamerenantsika azy indray amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra midina miampy ny bokotra Power mandra-pisehoan'ny logo, rehefa mivoaka dia avoakanay mandritra ny iray segondra fotsiny izy ireo ary tsindrio izy ireo indray mandra-pivoakantsika ny efijery avy Hard reset izay hamafisinay amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra Power indroa. (Amin'ny fanaovantsika izany dia ho very ny atin'ny terminal misy antsika rehetra, eny fa na ny atiny multimedia toa ny mozika sy ny sary aza).
Fanazavana fanampiny - Ahoana ny fomba hanodinana ny maodely LG G2 D-800, D-802, D-803, V-380 ary F-320K, Ahoana ny fametrahana ny fanarenana voaova amin'ny LG G2, Ahoana ny fanavaozana ny LG G2 ho an'ny Android 4.4.2 Kit Kat nefa tsy very ny fanovana voaova
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » LG » LG G2: Ahoana ny fametrahana ny fanovana voaova amin'ny Android 4.4.2 Kit Kat
hametraka dia hoy izy:
Azonao atao ve azafady mba ampio aho fa vitako tsikelikely ny lesona iray manontolo fa amin'ny farany ao amin'ny programa lg up text dia apetrako tahaka ny ao amin'ny tutorial ary mahazo takelaka milaza aho hoe: azafady apetraka ny csmg b2c client tool select tool b2c menio fanomanana mpanjifa inona no ataoko? Misaotra anao
Ry namako manana ny G2 D802 natsofoko chip avy amina mpandraharaha misy 4G fa tsy mandeha ny 4G, inona no mety hitranga, havaozina ho kit Kat izany.
Amin'ny alàlan'ny alàlan'ny bug ny fanavaozana kitkat dia mahazo lesoka aho rehefa mahazo hafatra an-tsoratra.
Nandeha an'io kinova Android io aho nandritra ny herinandro mahery ary tsy manana olana amin'ny fahazoana na fandefasana SMS, nojereko manokana ary miasa tsara amiko ny serivisy.
Diego mendoza dia hoy izy:
Ry namako Francisco nohavaoziko satria azoko ny fanamarihana amin'ny telefaona fa misy fanavaozana OS izany.
Zavatra iray hafa ananako ny D802 ary manana tsipika miaraka amin'ny 4G aho fa ny 4G dia tsy mandeha, amin'ny telefaoninao Ao amin'ny safidy maoderina tambajotra safidy miseho LTE, na
2G / 3G mandeha ho azy fotsiny
Valiny tamin'i Diego Mendoza
ry namako te hiverina any amin'ny 4.2.2 aho, ny fanontaniako dia ny dingana rehetra ataoko amin'ny Internet tapaka?
Valio i diego mendoza
Ry namako aorian'ny bara fandrosoana dia tsy miseho ilay fikandrana lazainao, miseho ny varavarankely izay milaza amiko fa efa manana ny kinova rindrambaiko farany aho. inona no tsy mety ataoko?
Salama. Fisalasalana. Manana ny 2Gbyte Vodafone G32 aho. Iza amin'ireo no tokony hidina?
Nidina ny compilation 80210c avy any Vodafone aho ary tsy nidina ny dikanteny. Nahavita ny dingana rehetra ary tsy misy
Heveriko fa 10 no 4.2.2 marina?
Raha misy manisy ny rohy marina ... Faly aho
Nicolas Rdgz dia hoy izy:
Inona no firmware mikirakira ahy apetraka amin'ny lg g2 d802
Valiny tamin'i Nicolas Rdgz
Namana Nicolás amin'ny findainy ao amin'ilay safidin'ny maody amin'ny tamba-jotra, miseho ny safidin'ny LTE na tsy misy zavatra hafa miseho mandeha ho azy 2G / 3G, 2G fotsiny, 3G fotsiny, tiako ny valinteninao.
Salama, manana fomba mora kokoa hiverenana amin'ny stock rom aho. Hosokafinao ny fitaovana lg flas nefa tsy mampifandray ny finday na inona na inona, omenao azy io mba hamerenana ny lesoka fanavaozana ary apetrakao ny imei an'ny findainao, apetranao ho OK amin'ny zava-drehetra ary ampifandraisinao ny finday, hiteny anao fa diso izany tsy miseho ilay finday .. afaka 20 segondra dia mamaky ianao mba hamerenanao indray ny tiako holazaina ary andramo indray ary miverena amin'ny stock rom.
Nicolas raha mifandray ianao dia afaka manampy anao aho nefa tsy manao izany rehetra izany ary fantatro izany tamin'ny fanandramako an'ity lesona ity satria nohavaoziko teto ny KitKat ary nahagaga ary niverina aho hitahiry ny fanarenana.
Fanazavana tsara momba ireo fampianarana rehetra izay notsapako, tsy nisy tamin'izy ireo 100% no tsy nahita ilay proxy. Misaotra anao fa manana olana amin'ny fandefasan-kafatra hafatra aho indrisy fa nijanona ny hafatra raha azonao ampitaina amiko ny rohy 4.2.2 hiverenana misaotra.
10 ho an'ity fampianarana ity. Elaela aho vao nanapa-kevitra ny hanao an'io fikomiana rehetra io, saingy izay ihany. Ny zava-drehetra dia lasa lavorary, eny, nandoto nandritra ny fotoana rehetra aho. Hahaha. Amin'izao fotoana izao dia marina ny zava-drehetra ary tsy misy olana. Misaotra betsaka.
Ry namanao mpandresy, niverina tany amin'ny 4.2.2 ihany ve ianao? Sa nitaingina kitkat ianao avy eo?
Nanao ny dingana rehetra tamin'ny fomba lavorary aho, saingy ny 40% -n'ny ekipa ary 47% -n'ny fandaharana mihitsy no mahazo lesoka ary tsy afaka manohy aho.
Toy izany koa no mitranga amiko rehefa manao izany amin'ny fomba fanarenana fanavaozana. Inona no tsy mety ataoko?
Miala tsiny fa 49% ny ekipa.
reinaldo salazar dia hoy izy:
mirary alina namana, havaozy ny lg g2 ho kit kit ary izao dia tsy mahazo sy tsy mandefa hafatra, ary mijery ny tutorial anao aho, fa ny fampidirako ny firmware an'ny maodeliko d80220a-466-92 izay vita amin'ny korea ihany no mila ampidiko. Tsy afaka azafady Misaotra anao noho ny fanampianao. Manantena ny valinteninao aho ..
Mamaly an'i reinaldo salazar
Xq Tsy azoko ilay folder programdata / lgmobileax, inona no tsy mety ataoko?
Rodrigos dia hoy izy:
flashiee a d802 amin'ny lg g2 d805 ary tsy afaka miverina amin'ny stock rom aho misy olona mahalala tutorial mba hamahana azy
Valiny tamin'i Rodrigos
Salama Rodrigo, zavatra mitovy amiko no nanjo ahy, tiako ho fantatra raha namaha azy ianao ary ahoana no nanaovanao azy?
Ry namako tsara, manana olana lehibe aho, ny Lg G2 D802 nahazo ny fanavaozana ny Kit Kat 4.4 tamin'ny alàlan'ny OTA rehefa nametraka azy aho, hitako ny olana fa tsy afaka nandefa hafatra an-tsoratra aho, nametraka ny kinova 4.2.2 nidina avy amin'ny pejy Lg ary izao dia very ny Knock On (manokatra amin'ny fikasihan-tanana roa), efa nametraka karazana kinova maromaro avy amin'ny firenena samihafa aho ary tsy nanamarina fa navoazina izy ity ary raha toa ka miasa izy hanakanana ny telefaona 🙁 misy mahalala fa Haiko? MISAOTRA
Salama Aurora, afaka manampy ahy hiverina amin'ny 4.2.2 ianao satria zavatra mitovy no nitranga tamiko ary mbola tsy afaka mandefa hafatra aho, azafady, miandry ny fanampianao aho. Grs
Salama aurora namana, azafady ilaiko ianao manampy ahy amin'ny g2 hiverina amin'ny 4.2.2, maninona no nitranga taminao ary mbola manana olana mitovy amin'izany aho, nanao ahoana ianao? Mankasitraka azy aho.
robert moncada dia hoy izy:
Salama Reinaldo, nividy LG D802 maimaim-poana tany Espana aho ary niverina tany Venezoela dia mety amiko izany. Tamin'ny 11 aprily, nampidina ny fanavaozana aho ary nanomboka tamin'izay dia najanoko ny fahazoako sy ny fandefasana SMS avy amin'i Movistar. Ny hafatra dia hoe "NITOHANA NY FITORIANA TSY FAHATONDRANA" Izany dia miaraka amin'ny kinova 20C. Tamin'ny faran'ny volana aprily dia nahazo fanavaozam-baovao vaovao ho an'ny 20D aho ary tavela tamin'io toe-javatra io ihany. Izaho koa dia nanana olana tamin'ny MAPS fa noho ireo fanavaozana dia tsy nety tamiko izy io ary hafatra mitovy io ary namaha azy aho tamin'ny famerenako ireo fitaovana.
Sintomy ny rindranasa TEXTRA avy amin'ny PLAY STORE ary araraoty ny fandefasana sy ny fandraisana SMS mandra-pivoakan'ny vahaolana amin'ny olan'ny fampiharana LG M802AGES teratany LG dXNUMX.
Raha nanapa-kevitra ny hiverina amin'ny andiany voalohany an'ny android aho dia tsy maintsy fantatro hoe iza no napetraka ary izany vaovao izany dia tsy maintsy ho azo amin'ny telefaona vaovao, satria namaky ny hevitr'i aurora aho ary tsy te ho very asa sasany. ny fitaovana.
Mamaly an'i robert moncada
Salama Robert, iza amin'ireo olana roa no namaha anao tamin'ny famerenana ireo fitaovana ireo? Efa nakarako ny application grs .. Nanana ilay 20A aho ary nahazo fanavaozana hafa ary tavela tamin'ny 20B aho dia mbola nanana olana sms mitovy ihany. Ny sisa amin'ny fampiharana dia mandeha tsara.
Jorge A dia hoy izy:
Ny LG Optimus g nataoko dia tsy nampakatra afa-tsy 4.4.2 fa ny asany 4g lte dia tsy ao anaty menio safidy fa mahatratra 2g sy 3g fotsiny! Miasa ho an'ny G Optimus-ko ve io fomba io?
Valio amin'i Jorge A
Brunoo Zaratee dia hoy izy:
Valiny tamin'i Brunoo Zaratee
Azafady mba lazao amiko raha miasa amin'ny android 4.2.2 ity fomba ity
alfonsorl dia hoy izy:
tapaka ny rohy fampidinana azafady apetraho izy ireo fa te hanandrana an'ity fomba ity aho
Mamaly an'i alfonsorl
E-ANBAI (marina tsara), hafahafa Japoney tena izy
Fampiharana 5 hahazoana tombony betsaka amin'ny Chromecast